သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေပါနဲ့ …
June 17, 2019 Cele Love 0
သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေပါနဲ့ … သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေပါနဲ့ ။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ သင်ထင်သလို တန်ဖိုးမကြီး လှပါဘူး …။ တန်ဖိုးဆိုတာ သင့်စိတ်က သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ် ။ ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ကြီးမားလာတာနဲ့ […]
တနင်္လာသားသမီးများ အတွက် ၂၀၁၉ – ခုနှစ် ၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း….
တနင်္လာသားသမီးများ အတွက် ၂၀၁၉ – ခုနှစ် ၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း…. ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ အမှန်ဘက်ကနေ စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊အမှုအချုပ်၊ထောင်ဂတ်များနှင့်ပက်သက်ရခြင်း၊အနားဝန်းကျင်တွင် မီးလန့်ရှော့ဖြစ်ကြုံရတတ်ခြင်း ၊ သူများပြဿနာကြားဝင် ခေါင်းခံဖြေရှင်းပေးရခြင်းတို့ ကြုံရလတ္တံ့။ အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာအပြောင်းအလဲများကြုံရလတ္တံ့။ မိမိ၏ ဘ၀ခံယူချက်များ ၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆများ ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားများ […]
ခရီးထွက်/ကားစီးတိုင်း လူမမာတစ်ယောက်လို့ ဖြစ်သွားရလောက်အောင် မူးတက်၊ အန်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက် ….
ခရီးထွက်/ကားစီးတိုင်း လူမမာတစ်ယောက်လို့ ဖြစ်သွားရလောက်အောင် မူးတက်၊ အန်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက် …. ခရီးထွက် ကားစီးတိုင်း လူမမာတစ်ယောက်လို့ ဖြစ်သွားရလောက်အောင် မူးတက်၊ အန်တက်တဲ့ လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် နော် ….. ကားစီးရင် ကားမူးတတ်တဲ့ သူတွေ ဒီနည်းလေးကို သုံးကြည့် လိုက် ပါ […]
လမ်းခွဲကြ​အောင် …. “လမ်းခွဲကြ​အောင်​….´´ “​အော်​ အင်းပါ …။´´ “​နောက်​ဆုံးအ​နေနဲ့ ငါစကား​ပြောချင်​တယ်​ နင်​နား​ထောင်​​ပေးမလား …?´ “အင်း ​ပြော​လေ´´ “ငါတို့ချစ်​သူ​တွေဖြစ်​ကြတာ ၁၀ လ​ကျော်​ပြီ​နော်​ ငါ​လေ သူများစုံတွဲ​တွေ အရမ်းချစ်​​နေကြတာ​တွေ့တိုင်း အရမ်းအားကျမိခဲ့တယ်​ နင်​သာငါ့ကို အဲ့​လောက်​ထိ ချစ်​​ပေးရင်​​ကောင်းမယ်​ဆိုပြီး​ပေါ့ …။ ´´ “အင်း´´ […]
နောင်မှ ရတဲ့နောင်တ ဒေါက်…ဒေါက်…. ဒေါက်….တံခါးခေါက်သံကြားလိုက်သည်…. ပြီး … အပြင်မှ အဖေ့ ခေါ်သံကိုပါကြားလိုက်ရသည် …။ ❝ငါ့ သား အဖေမင်းကိုပြောစရာရှိလို့❞ အလုပ်မှအဆင်မပြေမှုများရှိနေ၍ …. စိတ်မကြည်လင်နေသဖြင့်…. ကျွန်တော် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ပြန်အော်ပြောမိ သည် …။ ❝ နောက်မှပြော အဖေ ကျွန်တော် အလုပ်ကပြန်လာတာ […]
အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်တယ် … အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ နားချချ နားမ၀င် နိုင်တော့ပါဘူး …။ အရမ်းကို ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကို မကောင်းဘူး ပြောလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နိုင်သွားတယ် […]
အမှိုက်ကောက်ရတဲ့ဘ၀ကနေ သြဇီမှာပညာသင်ဆုရတဲ့အထိ ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး … ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဖနွမ်းပင်အမှိုက်ပုံကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ အခုလိုရင် ပညာသင်ဆုအပြည့်နဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်မှာ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမနာမည်ကတော့ ဆိုဖီဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဖီဟာ Cambodian Chidren’s Fund (CCF)ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ […]
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ခံစားမှုအားကောင်းလွန်းတဲ့ ရာသီခွင်(၄)မျိုး လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံချင်း၊ ခံစားနိုင်ပုံချင်း မတူကြပါဘူး။ အကျင့်စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအားကောင်းပြီး ခံစားမှုလည်းအားကောင်းလွန်းတဲ့သူလေးတွေကတော့ ဒီရာသီဖွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။ 1 . AQUARIUS (January 20 – February 18) ကုမ်ရာသီဖွားတွေဟာ ဖြန့်ကျက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကောင်းလွန်းပြီး ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်း သူမတူအောင် […]
မေးရိုးမပါပဲ မွေးခဲ့ပြီး စကားမပြောနိုင်ပေမယ့် RAPPER ဖြစ်လာတဲ့လူငယ် (Video)
မေးရိုးမပါပဲ မွေးခဲ့ပြီး စကားမပြောနိုင်ပေမယ့် RAPPER ဖြစ်လာတဲ့လူငယ် (Video) အမေရိကန်နိုင်ငံ အရီဇိုးနား၊ ဖီးနစ်က လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ မွေးစကထဲက မေးရိုးပါမလာတဲ့အတွက် အစားလည်း မစားနိုင်သလို အသံလည်းလုံးဝ ထွက်လို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရက်ပ်သီချင်းလောကမှာ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် …။ Isaiah Acosta ဟာ မွေးလာကတည်းက […]